စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်းမှာ သူတို့လေးတွေကြောင့် အရင်လိုပြိုလဲလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - Cele Gabar
စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်းမှာ သူတို့လေးတွေကြောင့် အရင်လိုပြိုလဲလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
By RainowPosted on July 2, 2020
မင်းသမီးချောခိုင်နှင်းဝေကတော့ အနုပညာလောကနဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကွာဝေးခဲ့ပြီးနောက် ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်ရှေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတစ်ယောက်ပါ။ လိုအပ်နေတဲ့နေရာကို လက်မနှေးကူညီနေတဲ့အပြင် ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာ တည်ထောင်ပြီး မိဘမဲ့ကလေးအယောက်သုံးဆယ်ကျော်ကို ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်နေပါသေးတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ဒီကလေးတွေကြောင့်ပဲ သူစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါတိုင်း အရင်လိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြိုလဲဖို့ မဖြစ်တော့ကြောင်း ရင်ထဲကခံစားချက်တချို့ကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “တ‌စ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ပြီး မိသားစုကိုဦးဆောင်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းက Strongဖြစ်တယ် ပဲ သိကြတာ ဘယ်လောက် ထူမတ်နေရလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အသိဆုံးပဲ ဖြစ်တယ်…. အရင်ကဆို ငါပြိုလဲရင် ငါ့အမေ ဘယ်လိုရပ်တည်ရှင်သန်မလဲ အတွေးနဲ့ ပြန်ထူမတ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်မ စိတ်အတက်အကျမှာ ကျွန်မ အဆိုးဝါးဆုံးအချိန်တွေရှိခဲ့ဖူးတာပေါ့…. စိတ်အတက်အကျမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်လွတ်လပ်စွာ စိတ်ထွက်ပေါက်ပေးခဲ့တဲ့ အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့ဖူးတာပေါ့ …
ကျွန်မ အခုများတော့… ဒီကလေးတွေ မျက်နှာ… ဒီကလေးတွေ အပြုံး… နို့ဆာလို့ ငိုတဲ့ အသံလေးတွေ မုန့်ခွံ့ကျွေးလို့ အားပါးတရ စားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေ…. ကျွန်မ စိတ်ကျချိန်တောင် ငါဘယ်လိုမှ ပြိုလဲလို့မရဖူးဆိုတဲ့ ကျမ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်ကလေးတွေကြောင့် ကျွန်မရဲ့ အင်အား…. ကျွန်မရဲ့ အားမာန်တွေအကုန် အမြဲတမ်းတက်ကြွနေခဲ့ရပါတယ်… ချစ်လိုက်တာ သားနဲ့သမီးလေးတွေရေ ” ဆိုပြီးရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သူ့ရဲ့သား၊သမီးအရင်းလေးတွေလို ချစ်ခင်ရတဲ့ကလေးတွေကြောင့် အချိန်တိုင်းမှာ ကလေးတွေရှေ့က မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ပြိုလဲဖို့မလွယ်တောပါဘူးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ…
Source – Khine Hnin Wai
မြင်နေကျပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ တမူထူးခြားနေတဲ့ Pre Wedding…
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrity, Celebrity Myanmar, Khine Hnin Wai, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, ခိုင်နှင်းဝေ, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ
Previous post မေမေ မယ်လိုဒီကို သွေးပေါင်ကိုယ်တိုင်ချိန်ပေးပြီး ဂရုစိုက်နေတဲ့ သားလေး သိဒ္ဓိစစ်
Next post ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ ပရိသတ်ကို စိတ်ပူသွားစေခဲ့တဲ့ ယဥ်လက်